Ungayibuyekeza kanjani i-gstreamer0.10-plugins-bad ku-LMDE RC 201108 | Kusuka kuLinux
Ngemuva kwe ukufakwa kwe-LMDE RC 201108 bekukhona iphakheji eyodwa kuphela enginike iphutha lapho ngiyibuyekeza: gstreamer0.10-plugins-bad.
Ngenhlanhla isisombululo sale nkinga silula futhi sishesha impela. Sivula ukuphela bese singena ngemvume njengo izimpande noma sisebenzisa sudo, njengoba kunjalo I-LMDE, ngomyalo olandelayo.
Futhi kufanele sithole into enjengale:
(Kufundwa i-database ... amafayili nezikhombisi-ndlela ezingama-158926 ezifakiwe njengamanje.) Ilungiselela ukufaka esikhundleni se-gstreamer0.10-plugins-bad 0.10.22-2 (using ... / gstreamer0.10-plugins-bad_0.10.22-3_i386.deb). .. Kukhishwa okufakwa esikhundleni se-gstreamer0.10-plugins-bad ... dpkg: isixwayiso: inkinga ebhala ngaphezulu ngoba --force inikwe amandla: izama ukubhala ngaphezulu '/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstxvid.so', nayo ekuphakeji gstreamer0.10 .0.10.22-plugins-really-bad 0.1-0.10 Ukusetha i-gstreamer0.10.22-plugins-bad (3-2.0) ... Icubungula izimbangela ze-libglib0-XNUMX ...
Ilungile. Sine IGstreamer ifakiwe futhi ibuyekezwe 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayibuyekeza kanjani i-gstreamer0.10-plugins-bad ku-LMDE RC 201108
UDario Freije kusho
Ngibonga kakhulu! Kusebenze kwezili-10.
Ngibambeke kulelo phakheji lapho ngifuna ukuvuselela futhi angizange ngiqhubeke nezinye izibuyekezo ezingama-418.
Phendula uDario Freije
Yebo, lokhu kubonakala kimi….
Ngingakwenza okuthile ukukulungisa?
Siyabonga ngebhulogi yakho. Ngithemba ukufunda okuningi kuwe !!
Ngafaka i-lmde 201109 futhi lapho ngenza isibuyekezo sokuqala ngathola iphutha lamaphakeji aphukile ngakho-ke ngabuyekeza kusuka esigungwini nge-sudo apt-get update kanye ne-sudo apt-get dist-upgrade futhi konke kwahamba kahle ekugcineni ngasebenzisa Sudo apt-get - f ukufaka ngemuva kwezinsuku ezimbalwa ngibe nezinkinga (lelo bekuyiphutha lami) futhi ngaphoqeleka ukufaka kabusha lapho ngizama ukwenza isibuyekezo futhi ngathola iphutha nge-gstreamer futhi ngazama ukukulungisa ngezindlela eziningi futhi angikwazanga ukusebenzisa iSudo dpkg -i –force -overwrite futhi noma kunjalo angizange ngishiye, sengivele ngiphelelwe yithemba ngenze okuthile okuyisilima kakhulu kodwa kwasebenza! Vuselela ukuskena i-gstreamer ekugcineni faka i-gstreamer futhi ungabe usamaka iphutha yize kunjalo kusuka ekusetshenzisweni kwesinali Sudo pat-get - f ukufaka, ngiyethemba lokho kuyasiza